Sabata paska Lehibe ny 11 jolay 2015 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
14 juillet 2015 zokyidealy
Tontosa soamantsara ny fankalazana na fanamarihana ny paska lehibe teo anivon’ny Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany rezionaly Antananarivo ny Sabata 11 Jolay 2015 lasa teo. Tsy ny teo amin’ny rezionaly Antananarivo ihany anefa fa maro ihany koa no niara-dalana tamin’izany ka anisan’izany ny Fiangonana Apokalypsy tao amin’ny Nosy La Réunion sy ireo faritany vitsivitsy teto Madagasikara sy tany ampitan-dranomasina.
Niavaka tokoa ny fotoana tamin’io Sabata Paska lehibe io satria dia anisan’ny nanamarika izany ny fisian’ny fandraisana ny fanasan’nyTompo, fitokanana antoko mpihira (chorale), mpitendry zava-maneno ary koa ny fampahafantarana ampahibemaso ny fisian’ilay teknolojia vaovao nomerika, izay ahafana manaraka ny vaovao mahakasika ny fiangonana (TNT: Television Numérique Terrestre).
Nisongandina ihany koa ny hafatra manokana izay nentin’ny mpanompon’Andriamanitra dia ny pasteur Mailhol André Christian Dieu Donné ka navohiny manokana tamin’izany fa rehefa avy niampita ny Jordana ny zanak’Israely
dia noforana avokoa ny lehilahy rehetra, nomarihiny anefa fa tsy famorana ara-bakiteny intsony no hotanterahina eto fa ny fo mihintsy no forana, izany hoe avy ao amin’ny fo no iavian’ny zavatra rehetra (faharatsiana maro samihafa,fahatezerana sns….) ka izany no tokony hamorana ny fo mba ho fo vaovao, toetra vaovao no ho hitasoritra amin’ny olona avy nita an i Jordana.
Nambarany manokana ihany koa fa vaninm-potoana efa tokony handraisana ny vokatry ny teny fikasana nomen’i Jehovah izao ka porofon’izany ny fahatongavan’ilay TNT na « Télévision Numérique Terrèstre »; izay marihana etoana moa fa toy irony televiziona mandeha amin’ny satellite irony (canalsat, canal+, sns…) ka azon’ny sarababem-bahoaka jifaina.
Fety be sy fifaliam-be araka izany nandritra io fotoana io ary dia vahoaka an’alina maro dia maro no tonga nanome voninahitra sy nidera an’Andriamanitra. Teny Ambohimarina Itaosy moa no nanatanterahana izany fotoam-bavaka izany ka dia tomefy olona ny toerana ary efa nila tsy ho antonona intsony ilay toerana fanaovana fivoriam-bavaka ka dia tsy maintsy navoaka ivelan’ny faritra ireo fiara rehetra.
Horakoraka, kopaka folara, dihy, hira maredona, feon’ny mifaly, ireo no re sy hita soritra tamin’ireo vahoaka tonga teny an-toerana ka dia ny masoandro mady no nampalahelo. Anisan’ny nampisongadina ity fotoan-dehibe ity ihany koa ny firaisan-kina sy firaisan-tsain’ireo mpino tao amin’ny Fiangonana Apokalypsy fa dia nitovy avokoa ny fanamiana rehetra eny fa na dia nangatsiaka aza ny andro dia nanao ny fanamiana manga sy fotsy ireo vahoakan’Andriamanitra ka hita fa dia niavaka tanteraka.
Teo ihany koa ny teo amin’ny lafiny fikarakarana; ny faneken’ny olona fandaminana ka na dia teo aza ny fikasan’ny mpanakorontana sy ny maro hafa hanakorontana dia tsy nampiontsona ireto vahoaka an’aliny maro izany fa dia toa vao mainka aza toa tosika iray manosika azy ireo handroso sy hijoro ka dia re matetika moa ny hoe: « tsy naman’izay mihemotra isika e ». Hita sy tsikaritra ary fa dia efa be aza ireo feo mandeha fa dia misavorovoro sy miparitaka ny fiangonana dia hita fa mbola ao anatin’ny heriny hatrany ny Fiangonana Apokalypsy ary mbola miorina sy mijoro tsara ireo mpino ao aminy.